Ukuvakasha kwemboni - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Imikhiqizo emikhulu yenkampani izesekeli ezibandayo ezigoqekayo ezibandayo, ezenziwa ngensimbi yerabha engamelana nelangabi engeniswe ngaphandle futhi yathuthukiswa ngochwepheshe benjoloba abadumile, amakhemikhali kanye nochwepheshe begridi ngophenyo nokuhlolwa okwenziwe ngeminyaka eyisikhombisa. ikhebula lezinsimbi ezibandayo ezinciphayo eChina, zingaphansi kwesilinganiso selungelo lokuzimela lombuso ngemuva kokuhlolwa yiWuhan High Voltage Research Institute State Grid Corporation yaseChina, Isikhungo Sezwe Sokulawulwa Kwekhwalithi kanye neTest of Insulator and Surge Arrester, ngamazinga kazwelonke GB11033 , GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-199, imikhiqizo ithathwa njengefanelekile ukuhlangabezana namazinga kazwelonke kuzo zonke izici.
Phakathi kwabo bonke abasebenzi abangama-256, abantu abaneziqu zobudokotela noma ze-bachelor's degree baneminyaka engu-17. ”Namathela emisha yebhizinisi; Funa inqubekela phambili ye-techno; Nikeza umkhiqizo osezingeni eliphakeme” kuyinkambiso yethu ngaso sonke isikhathi.
Inkampani yethu ibilokhu isendaweni ehamba phambili ekhaya ngenkolelo yayo yokuphatha yesimanje, amandla wezobuchwepheshe aqinisiwe, uhlelo lokuqondisa ikhwalithi yomsindo, isitifiketi sekhwalithi ephelele kanye neziqu, inqubo yokuhlola esezingeni eliphakeme kanye nokugunyazwa kwangemva kwenkonzo.
Sekuyiminyaka eyi-10, sinikeze izigidi zokufakwa kwentambo neminye imikhiqizo yenethiwekhi esekelayo ekwakhiweni nasekuvuseleleni inethiwekhi kazwelonke kagesi.Ngonyaka we-2004 inkampani yenze ngokugcwele ama-500kV kanye nama-insulators aphansi we-voltage, 35kV kanye ne-voltage ephansi ye-zinc oxide surge arrester, iyazihlukanisa switch, fuse dropout, electric substation busbar tube, booster shed, i-cable surge voltage limiters (ibhokisi), wall bushing, njll Lokhu kufinyelele ekuqhumeni okungokomlando kusuka emikhiqizweni kagesi ephansi naphakathi kuya ku-voltage ephezulu kakhulu, kusuka kokukodwa kuye ekwenzeni umnikelo omkhulu ekunikezelweni kwamandla kagesi okuphepha embonini kagesi, ujantshi, imboni kawoyela, imayini yamalahle namanye amabhizinisi amakhulu.Sizohlala siphikelela kunqubomgomo yethu egcina amehlo ethu ekusaseni lenkampani futhi inikela kangcono ngayo yonke insizakalo eyindilinga.